ပွဲကြိုမှာ လီဗာပူးကို အထင်သေးခဲ့ကြလို့ ရလဒ်ဆိုးခဲ့ကြတဲ့ ကလပ်အသင်းများ - Sports Home Time
ပွဲကြိုမှာ လီဗာပူးကို အထင်သေးခဲ့ကြလို့ ရလဒ်ဆိုးခဲ့ကြတဲ့ ကလပ်အသင်းများ
[Zawgyi] ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ ကလပ်အသင်း နှစ်သင်းကပဲ ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲဆက်မှုကို ပိုင်ဆိုင်နေတာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ဟာ ဒီအပတ် စနေနေ့မှာ ထိပ်တိုက် တွေ့ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးက နော်ဝစ်နဲ့ ဆောက်သမ်တန်ကို အနိုင်ရထားပြီး အာဆင်နယ်က နယူးကာဆယ်နဲ့ ဘန်လေ တို့ကို အနိုင်ရထားကာ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၁ နဲ့ ၂ နေရာတွေကို ဦးဆောင်နေကြတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း စနေနေ့ပွဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာခဲ့ချိန်မှာ အာဆင်နယ်ခံစစ်မှူး ဆိုကရေးတက်စ် ကတော့ လီဗာပူးကို နိမ့်ချတဲ့ စကားတစ်ခွန်း ထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
ဆိုကရေးတစ်က လီဗာပူးက ခက်ခဲတဲ့ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုပေမယ့် ဂန်းနားတို့ နောက်ဆုံး ယှဉ်ပြိုင်ထားတဲ့ ဘန်လေနဲ့ပွဲထက် ပိုလွယ်တဲ့ပွဲကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားခဲ့တယ်။
ဒီစကားကြောင့်ပဲ အင်္ဂလန် သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ Givemesport ကနေပြီး အန်ဖီးကွင်းမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မလုပ်ခင် အထင်သေးစကား ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် ရလဒ်တွေ ဆိုးရွားခဲ့တဲ့ ကလပ်အသင်းတွေကို စုစည်းဖော်ပြလာခဲ့တယ်။
၄င်းတို့ရဲ့ ဖော်ပြမှုမှာတော့ အန်ဖီးကွင်းကို အထင်မကြီးကြောင်း ပြောဆိုမှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြပြီး တကယ်တမ်း ရင်ဆိုင်ချိန်မှာ အပြောနဲ့ လက်တွ့မကျခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်ချန်ပီယံ ပီအက်ဂျီ၊ စပိန် လာလီဂါ ချန်ပီယံ ဘာစီလိုနာတို့ပါ ပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Marcelino | May 2016 | Villareal manager
ယာဂင်ကလော့ပ် ပထမဆုံးတာဝန်ယူတဲ့ ဘောလုံးရာသီအတွင်း ယူရိုပါလိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ ဗီလာရီးရဲနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိအကျော့အဖြစ် အန်ဖီးကွင်းထံ မသွားခင်မှာ ပထမအကျော့ကို ၁-၀ နဲ့ ဦးဆောင်ထားတဲ့ စပိန်ကလပ်မန်နေဂျာက အန်ဖီးကွင်းက သူတို့ ရင်ဆိုင်နိုင်မယ့် ကွင်း တစ်ကွင်းပါ လို့ ဆိုခဲ့တာပါ။
” အန်ဖီးကွင်းမှာ ကစားဖို့ဆိုတာက အရမ်းကောင်းတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပြီး သိပ်ကောင်းတဲ့ ပြိုင်ဘက်က ကျနော် တို့ကို စောင့်မျှော်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ကွင်းအတွင်း အားပေးသူတွေက ကျနော်တို့အပေါ် သက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းဖို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ အားပေးမှုက ကျနော်တို့ကို ပိုကောင်းစေဖို့ ဖြစ်မှာပါ။ အန်ဖီးမှာ ကျနော်တို့ ဗိုလ်လုပွဲကို ရောက်နိုင်တဲ့ ရလဒ် ယူနိုင်မယ်လို့ ခံစားနေရတယ်။ ” – မာဆယ်လီနို
‘Nice occasion’ လို့ မာဆယ်လီနို နာမည်တပ်ခဲ့တဲ့ အန်ဖီးကွင်းက လီဗာပူးဟာ ဗီလာရီးရဲလ်ကို ရက်ရက်စက်စက် ကစားခဲ့ပြီး စပိန်အသင်းဟာ ပွဲအစ ၇ မိနစ်မှာတင် ကိုယ်ဂိုးကို သွင်းမိခဲ့တယ်။ လီဗာပူးက ၃-၀ နဲ့ အနိုင်ယူပြီး ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်သွားပါတယ်။
Julian Nagelsmann | August 2017 | Hoffenheim manager
ယာဂင်ကလော့ပ် ကိုင်တွယ်မှုမှာ လီဗာပူးအသင်းဟာ ပထမဆုံး ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်မှု အဖြစ် ခြေစစ်ပွဲမှာ ဂျာမနီကလပ်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ပထမအကျော့ကိုတော့ လီဗာပူးက ၂-၁ နဲ့ ဦးဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ နေးစမန်းကတော့ ပွဲကြိုမှာ စကားလုံးစစ်ပွဲကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
” အန်ဖီးကွင်းမှာ ကျနော်တို့ အနိုင်ရရင်လည်း အံ့သြသင့်ကြမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ အိမ်ကွင်း၊ အဝေးကွင်း က သိပ်ကွာခြားတယ်လည်း မထင်ဘူး။ အန်ဖီးကွင်းမှာ ကစားရတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ဂရု မစိုက်ပါဘူး။ လီဗာပူးအသင်းကို သိပ်ပြီး လေးစားပြနေမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ကလည်း လုံလောက်အောင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ” – နေးစမန်း
ပွဲနေ့မှာတော့ လီဗာပူးက ပွဲအစ ၂၁ မိနစ်မှာတင် ၃ ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှစ်ကျော့ပေါင်း ရလဒ်မှာ လည်း ပြတ်သားစွာ အနိုင်ရခဲ့ကာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲအပြီးမှာ နေးစမန်းကတော့ လီဗာပူးအသင်းသားတွေနောက်မှာ မယုံနိုင်လောက်တဲ့ အားပေးမှုထုထည်ကြီးရှိပြီး ကျနော်တို့ဟာ ဦးနှောက်မရှိပဲ ပတ်ပြေးနေတဲ့ ခေါင်းမပါတဲ့ ကြက်ပေါက်တွေလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
Neymar | September 2018 | Paris Saint-Germain player
ပွဲကြိုနေ့မှာ နေမာက လီဗာပူးကို စကားစစ်ထိုးခဲ့ပြီး ” လီဗာပူးက ရာသီကုန်ရင် ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်တောင်မှ ထပ်မရမှာ မဟုတ်ဘူး ” လို့ နိမ့်ချခဲ့တာပါ။
ပွဲနေ့မှာတော့ လီဗာပူးက ပီအက်ဂျီကို ၃-၂ နဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ပြီး လီဗာပူးအသင်းသားတွေ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကိုင်တွယ်မှုမှာ နေမာဟာ ခြေစွမ်းလုံးဝ မပေါ်ခဲ့တဲ့ထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရာသီသိမ်းရာမှာ လီဗာပူးက ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား အနိုင်ရပြီး အမှတ်ပေးဇယားမှာလည်း မန်စီးတီးနောက် တစ်မှတ်အကွာ အဆင့် ၂ နေရာက ရာသီသိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။
Leroy Sane | April 2018 | Manchester City player
ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ် ပထမအကျော့ မကစားခင်မှာ ဆာနေးက ” အားပေးသံတွေ သိပ်ကျယ်တဲ့ ကွင်းမှာ ကစားရမှာက ကျနော်အတွက်တော့ ပျော်စရာပါပဲ။ အားပေးသံ ဆူညံတာက ကျနော်တို့ကို ဒုက္ခပေးမယ်လို့ မထင်ပါဘူး ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပထမအကျော့ အန်ဖီးမှာ ယှဉ်ပြိုင်စဉ်မှာတော့ လီဗာပူးက မန်စီးတီးကို ၃-၀ နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင်ယူပြီး ဒုတိယအကျော့မှာလည်း ထပ်မံအနိုင်ယူရာမှာ ၅-၁ ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ မန်စီးတီးကို ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ ထွက်ခွာစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Dries Mertens | December 2018 | Napoli player
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့်မှာ ဒရိုင်းမာတင်က အန်ဖီးကွင်းက ကျော်ကြားတဲ့ ‘This is Anfield’ အမှတ်အသား ကို လှောင်ပြောင်ခဲ့တာပါ။ လီဗာပူးဟာ အုပ်စုအဆင့်က ကျော်လွန်ဖို့ရာ နာပိုလီကို ၁-၀ (သို့) နှစ်ဂိုးပြတ် အနိုင်ရဖို့ လိုအပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲနေ့ရလဒ်မှာတော့ “ ဒီ အမှတ်အသား သေးသေးလေးက ‘This is Anfield’ တကယ်ကော ထူးခြားလို့လား? ” ဆိုပြီး မှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့ နာပိုလီဟာ အန်ဖီးကွင်းမှာ လီဗာပူးက ဖြုတ်ချခဲ့ခြင်းကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ ယူရိုပါလိဂ်ကို ဆင်းကစားခဲ့ရပါတယ်။
Luis Suarez | April 2019 | Barcelona player
အန်ဖီးကွင်းကိုတော့ လီဗာပူးကစားသမားဟောင်း ဆွာရက်စ်ကိုယ်တိုင်က အထင်သေးစကား ဆိုခဲ့တာပါ။ ပထမအကျော့မှာ အသင်းဟောင်းကို ဂိုးသွင်းပြီး ထူးထူးကဲကဲ အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ ဆွာရက်စ်က ” ကျနော် အန်ဖီးကွင်းမှာ ဘူးလုပ် မခံခဲ့ဖူးပါဘူး။ ယူနိုက်တက်မှာတော့ သူတို့က ကျနော်ကို လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အန်ဖီးကွင်းက ကျနော်ပရိသတ်တွေ ဒါမျိုးလုပ်တာကို ကြားရမယ် မထင်ပါဘူး။ သူတို့တွေက လှောင်ပြောင်မှုအစား ကျနော်ကို လက်ခုပ် သြဘာပေးကြပါလိမ့်မယ် ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆွာရက်စ်က သူ့ပရိသတ်တွေလို ပမာမခန့် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အန်ဖီးကွင်းက လီဗာပူးပရိသတ်တွေက တိုက်စစ်မှူးဟောင်းကို မိနစ် ၉၀ လုံး ဘူးလုပ်ခဲ့ကြကာ ပွဲအပြီးမှာတော့ ဘာစီလိုနာက ၄-၀ ရလဒ်နဲ့ အရှက်တကွဲ အရေးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Sokratis | August 2019 | Arsenal player
ဒီအပတ် ရင်ဆိုင်ရမယ့် အန်ဖီးကွင်းက ပွဲကြိုမှာတော့ အာဆင်နယ်ခံစစ်မှူး ဆိုကရေးတက်စ်က ” ခံစစ်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘန်လေလို အသင်းကို ရင်ဆိုင်ကစားရတာ ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အရမ်း တိုက်ခိုက်ရတယ်။ လီဗာပူးကတော့ ခြားနားတဲ့ပွဲပါ။ ဘန်လေထက် ပိုလွယ်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ သူတို့က အရမ်းကြီး မတိုက်ခိုက်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် သူတို့လည်း ဘောလုံးကစားတာပါပဲ။ ” လို့ ဆိုထားတာပါ။
ဆိုကရေးတက်စ်ကကော သူ့ရှေ့က နောင်တော်တွေလမ်းစဉ်လိုက်မလား (သို့) နှစ်ရာသီဆက် ရှူံးပွဲ မရှိထားတဲ့ အန်ဖီးကွင်းမှာ ပထမဆုံး အနိုင်ရအသင်းရဲ့ အသင်းသားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်မလား လာမယ့် စနေနေ့မှာ စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
[Unicode] ပရီးမီးယားလိဂျမှာတော့ ကလပျအသငျး နှဈသငျးကပဲ ရာနှုနျးပွညျ့ နိုငျပှဲဆကျမှုကို ပိုငျဆိုငျနတော ဖွဈပွီး အဆိုပါ နှဈသငျးဖွဈတဲ့ လီဗာပူးနဲ့ အာဆငျနယျတို့ဟာ ဒီအပတျ စနနေမှေ့ာ ထိပျတိုကျ တှကွေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူးက နျောဝဈနဲ့ ဆောကျသမျတနျကို အနိုငျရထားပွီး အာဆငျနယျက နယူးကာဆယျနဲ့ ဘနျလေ တို့ကို အနိုငျရထားကာ အမှတျပေးဇယား အဆငျ့ ၁ နဲ့ ၂ နရောတှကေို ဦးဆောငျနကွေတာပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး စနနေပှေဲ့က စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးလာခဲ့ခြိနျမှာ အာဆငျနယျခံစဈမှူး ဆိုကရေးတကျဈ ကတော့ လီဗာပူးကို နိမျ့ခတြဲ့ စကားတဈခှနျး ထုတျပွောလာခဲ့ပါတယျ။
ဆိုကရေးတဈက လီဗာပူးက ခကျခဲတဲ့ပှဲဖွဈမယျဆိုပမေယျ့ ဂနျးနားတို့ နောကျဆုံး ယှဉျပွိုငျထားတဲ့ ဘနျလနေဲ့ပှဲထကျ ပိုလှယျတဲ့ပှဲကို ရငျဆိုငျရနိုငျတယျလို့ ဆိုထားခဲ့တယျ။
ဒီစကားကွောငျ့ပဲ အင်ျဂလနျ သတငျးဌာနဖွဈတဲ့ Givemesport ကနပွေီး အနျဖီးကှငျးမှာ သှားရောကျယှဉျပွိုငျခွငျး မလုပျခငျ အထငျသေးစကား ပွောဆိုခဲ့ပမေယျ့ ရလဒျတှေ ဆိုးရှားခဲ့တဲ့ ကလပျအသငျးတှကေို စုစညျးဖျောပွလာခဲ့တယျ။
၎င်းငျးတို့ရဲ့ ဖျောပွမှုမှာတော့ အနျဖီးကှငျးကို အထငျမကွီးကွောငျး ပွောဆိုမှုတှေ လုပျခဲ့ကွပွီး တကယျတမျး ရငျဆိုငျခြိနျမှာ အပွောနဲ့ လကျတှ့မကခြဲ့တဲ့ ပွငျသဈခနျြပီယံ ပီအကျဂြီ၊ စပိနျ လာလီဂါ ခနျြပီယံ ဘာစီလိုနာတို့ပါ ပါဝငျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
ယာဂငျကလော့ပျ ပထမဆုံးတာဝနျယူတဲ့ ဘောလုံးရာသီအတှငျး ယူရိုပါလိဂျ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့မှာ ဗီလာရီးရဲနဲ့ ထိပျတိုကျတှခေဲ့ပါတယျ။ ဒုတိအကြော့အဖွဈ အနျဖီးကှငျးထံ မသှားခငျမှာ ပထမအကြော့ကို ၁-၀ နဲ့ ဦးဆောငျထားတဲ့ စပိနျကလပျမနျနဂြောက အနျဖီးကှငျးက သူတို့ ရငျဆိုငျနိုငျမယျ့ ကှငျး တဈကှငျးပါ လို့ ဆိုခဲ့တာပါ။
” အနျဖီးကှငျးမှာ ကစားဖို့ဆိုတာက အရမျးကောငျးတဲ့ ကိစ်စဖွဈပွီး သိပျကောငျးတဲ့ ပွိုငျဘကျက ကနြျော တို့ကို စောငျ့မြှျောနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့လို့ ကှငျးအတှငျး အားပေးသူတှကေ ကနြျောတို့အပျေါ သကျရောကျမယျဆိုရငျတော့ ကောငျးဖို့ပဲ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ရဲ့ အားပေးမှုက ကနြျောတို့ကို ပိုကောငျးစဖေို့ ဖွဈမှာပါ။ အနျဖီးမှာ ကနြျောတို့ ဗိုလျလုပှဲကို ရောကျနိုငျတဲ့ ရလဒျ ယူနိုငျမယျလို့ ခံစားနရေတယျ။ ” – မာဆယျလီနို
‘Nice occasion’ လို့ မာဆယျလီနို နာမညျတပျခဲ့တဲ့ အနျဖီးကှငျးက လီဗာပူးဟာ ဗီလာရီးရဲလျကို ရကျရကျစကျစကျ ကစားခဲ့ပွီး စပိနျအသငျးဟာ ပှဲအစ ၇ မိနဈမှာတငျ ကိုယျဂိုးကို သှငျးမိခဲ့တယျ။ လီဗာပူးက ၃-၀ နဲ့ အနိုငျယူပွီး ဗိုလျလုပှဲကို တကျရောကျသှားပါတယျ။
ယာဂငျကလော့ပျ ကိုငျတှယျမှုမှာ လီဗာပူးအသငျးဟာ ပထမဆုံး ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲကို ပါဝငျ ယှဉျပွိုငျမှု အဖွဈ ခွစေဈပှဲမှာ ဂြာမနီကလပျနဲ့ ထိပျတိုကျတှခေဲ့တာဖွဈတယျ။ ပထမအကြော့ကိုတော့ လီဗာပူးက ၂-၁ နဲ့ ဦးဆောငျထားခဲ့ပါတယျ။ နေးစမနျးကတော့ ပှဲကွိုမှာ စကားလုံးစဈပှဲကို စတငျခဲ့ပါတယျ။
” အနျဖီးကှငျးမှာ ကနြျောတို့ အနိုငျရရငျလညျး အံ့သွသငျ့ကွမယျလို့ မထငျပါဘူး။ အိမျကှငျး၊ အဝေးကှငျး က သိပျကှာခွားတယျလညျး မထငျဘူး။ အနျဖီးကှငျးမှာ ကစားရတယျဆိုတာကို ကနြျောတို့ ဂရု မစိုကျပါဘူး။ လီဗာပူးအသငျးကို သိပျပွီး လေးစားပွနမှောလညျး မဟုတျဘူး။ ကနြျောတို့ကလညျး လုံလောကျအောငျ ကောငျးမှနျပါတယျ။ ” – နေးစမနျး
ပှဲနမှေ့ာတော့ လီဗာပူးက ပှဲအစ ၂၁ မိနဈမှာတငျ ၃ ဂိုးသှငျးယူခဲ့တာဖွဈပွီး နှဈကြော့ပေါငျး ရလဒျမှာ လညျး ပွတျသားစှာ အနိုငျရခဲ့ကာ ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစုအဆငျ့ကို ရောကျခဲ့ပါတယျ။ ပှဲအပွီးမှာ နေးစမနျးကတော့ လီဗာပူးအသငျးသားတှနေောကျမှာ မယုံနိုငျလောကျတဲ့ အားပေးမှုထုထညျကွီးရှိပွီး ကနြျောတို့ဟာ ဦးနှောကျမရှိပဲ ပတျပွေးနတေဲ့ ခေါငျးမပါတဲ့ ကွကျပေါကျတှလေို ဖွဈခဲ့ပါတယျလို့ ဝနျခံခဲ့ပါတယျ။
ပှဲကွိုနမှေ့ာ နမောက လီဗာပူးကို စကားစဈထိုးခဲ့ပွီး ” လီဗာပူးက ရာသီကုနျရငျ ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျခှငျ့တောငျမှ ထပျမရမှာ မဟုတျဘူး ” လို့ နိမျ့ခခြဲ့တာပါ။
ပှဲနမှေ့ာတော့ လီဗာပူးက ပီအကျဂြီကို ၃-၂ နဲ့ အနိုငျယူခဲ့ပွီး လီဗာပူးအသငျးသားတှေ ခပျကွမျးကွမျး ကိုငျတှယျမှုမှာ နမောဟာ ခွစှေမျးလုံးဝ မပျေါခဲ့တဲ့ထိ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ရာသီသိမျးရာမှာ လီဗာပူးက ခနျြပီယံလိဂျဖလား အနိုငျရပွီး အမှတျပေးဇယားမှာလညျး မနျစီးတီးနောကျ တဈမှတျအကှာ အဆငျ့ ၂ နရောက ရာသီသိမျးခဲ့တာဖွဈတယျ။
ခနျြပီယံလိဂျကှာတားဖိုငျနယျ ပထမအကြော့ မကစားခငျမှာ ဆာနေးက ” အားပေးသံတှေ သိပျကယျြတဲ့ ကှငျးမှာ ကစားရမှာက ကနြျောအတှကျတော့ ပြျောစရာပါပဲ။ အားပေးသံ ဆူညံတာက ကနြျောတို့ကို ဒုက်ခပေးမယျလို့ မထငျပါဘူး ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ပထမအကြော့ အနျဖီးမှာ ယှဉျပွိုငျစဉျမှာတော့ လီဗာပူးက မနျစီးတီးကို ၃-၀ နဲ့ ဂိုးပွတျ အနိုငျယူပွီး ဒုတိယအကြော့မှာလညျး ထပျမံအနိုငျယူရာမှာ ၅-၁ ဆိုတဲ့ ရလဒျနဲ့ မနျစီးတီးကို ခနျြပီယံလိဂျကနေ ထှကျခှာစခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစုအဆငျ့မှာ ဒရိုငျးမာတငျက အနျဖီးကှငျးက ကြျောကွားတဲ့ ‘This is Anfield’ အမှတျအသား ကို လှောငျပွောငျခဲ့တာပါ။ လီဗာပူးဟာ အုပျစုအဆငျ့က ကြျောလှနျဖို့ရာ နာပိုလီကို ၁-၀ (သို့) နှဈဂိုးပွတျ အနိုငျရဖို့ လိုအပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ပှဲနရေ့လဒျမှာတော့ “ ဒီ အမှတျအသား သေးသေးလေးက ‘This is Anfield’ တကယျကော ထူးခွားလို့လား? ” ဆိုပွီး မှတျခကျြပေးခဲ့တဲ့ နာပိုလီဟာ အနျဖီးကှငျးမှာ လီဗာပူးက ဖွုတျခခြဲ့ခွငျးကို ရငျဆိုငျခဲ့ရပွီး ခနျြပီယံလိဂျကနေ ယူရိုပါလိဂျကို ဆငျးကစားခဲ့ရပါတယျ။
အနျဖီးကှငျးကိုတော့ လီဗာပူးကစားသမားဟောငျး ဆှာရကျဈကိုယျတိုငျက အထငျသေးစကား ဆိုခဲ့တာပါ။ ပထမအကြော့မှာ အသငျးဟောငျးကို ဂိုးသှငျးပွီး ထူးထူးကဲကဲ အောငျပှဲခံခဲ့တဲ့ ဆှာရကျဈက ” ကနြျော အနျဖီးကှငျးမှာ ဘူးလုပျ မခံခဲ့ဖူးပါဘူး။ ယူနိုကျတကျမှာတော့ သူတို့က ကနြျောကို လှောငျပွောငျခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ အနျဖီးကှငျးက ကနြျောပရိသတျတှေ ဒါမြိုးလုပျတာကို ကွားရမယျ မထငျပါဘူး။ သူတို့တှကေ လှောငျပွောငျမှုအစား ကနြျောကို လကျခုပျ သွဘာပေးကွပါလိမျ့မယျ ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဆှာရကျဈက သူ့ပရိသတျတှလေို ပမာမခနျ့ ပွောဆိုခဲ့တဲ့ အနျဖီးကှငျးက လီဗာပူးပရိသတျတှကေ တိုကျစဈမှူးဟောငျးကို မိနဈ ၉၀ လုံး ဘူးလုပျခဲ့ကွကာ ပှဲအပွီးမှာတော့ ဘာစီလိုနာက ၄-၀ ရလဒျနဲ့ အရှကျတကှဲ အရေးနိမျ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီအပတျ ရငျဆိုငျရမယျ့ အနျဖီးကှငျးက ပှဲကွိုမှာတော့ အာဆငျနယျခံစဈမှူး ဆိုကရေးတကျဈက ” ခံစဈသမားတဈယောကျအနနေဲ့ ဘနျလလေို အသငျးကို ရငျဆိုငျကစားရတာ ပိုခကျခဲပါတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အရမျး တိုကျခိုကျရတယျ။ လီဗာပူးကတော့ ခွားနားတဲ့ပှဲပါ။ ဘနျလထေကျ ပိုလှယျတာ ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတာပေါ့။ သူတို့က အရမျးကွီး မတိုကျခိုကျဘူးလေ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့လညျး ဘောလုံးကစားတာပါပဲ။ ” လို့ ဆိုထားတာပါ။
ဆိုကရေးတကျဈကကော သူ့ရှကေ့ နောငျတျောတှလေမျးစဉျလိုကျမလား (သို့) နှဈရာသီဆကျ ရှူံးပှဲ မရှိထားတဲ့ အနျဖီးကှငျးမှာ ပထမဆုံး အနိုငျရအသငျးရဲ့ အသငျးသားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျမလား လာမယျ့ စနနေမှေ့ာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
နာမည်ကျော်တွေကို ဖြုတ်ချပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံးဖြစ်လာသူ
နေမာကို ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့ ဆွာရက်စ်ကိုပါ စွန့်ရန် ကြံလာတဲ့ ဘာစီလိုနာ